Xtify: Enterprise Nhare Push Mhinduro | Martech Zone
Xtify: Enterprise Nhare Push Mhinduro
Muvhuro, October 7, 2013 Douglas Karr
Ichangotengwa neBM, Xtify ndeye yekuzvarwa Push chiziviso chikuva cheIOS, Android, Windows uye Nhare mbozha
Xtify inobatsira vatengesi kununura akakodzera uye anoitika ekushinha notisi uye zvemukati kutyaira kubatanidzwa uye kuita mari, kuchengetedza yako mhando yepamusoro-ye-pfungwa. Zvemukati zvinogona kutumirwa zvine simba zvinoenderana nezvikamu zvevatengi, nzvimbo, uye maitiro. Zvese maficha anowanikwa kuburikidza nemusika-ane hushamwari dashboard kana API yehurongwa hwakagadzirwa mameseji.
Zvipiriso kubva Xtify dzinosanganisira:
Native uye Web Notifications - sanganisa notisheni dzakanangwa mumawebhusaiti ako ese pamwe neazvako iOS, Android, BlackBerry, uye Windows maapp.
Chiitiko uye Nzvimbo Zvinokonzeresa - Shandisa mufambiro wevatengi wega wega uye nzvimbo yepanyama, uye kufukidza zvikamu zvevatengi kutyaira zviito zvine musoro zvaunoda.
Push, SMS uye Passbook - Shingairira vatengi vako mbozhanhare munzira inovafanira. Dhiraina brand kubatanidzwa, mashandisiro eapps uye kuita mari nematengesi-anobatsira maturusi.
Kuyera-chaiko-nguva - Tora mushandirapamwe, kunyorera uye mushandisi-chikamu analytics. Nzwisisa kuti mameseji ako anotyaira kudyidzana kwechiratidzo uye zviito zvaunoda.
Enterprise engagmeents anosanganisira risingagumi mishandirapamwe uye mameseji, risingagumi vatengi zvikamu, risingagumi Geo-Targeting uye Real-nguva Geo-Triggering, kuitisa QA, kurovedza, mushandirapamwe rutsigiro uye chizvarwa (iOS, Android, BlackBerry, Windows) uye Webhu (Nhare, Tafura, Desktop ) Notifications, SMS uye Passbook.
Kugadziridza: Zvemukati, Nzira, Landings uye Shanduko